China 3M-150M Telecom Towers Manufacture and Factory |XY Tower
Inqaba yonxibelelwano yohlobo lwenqaba yokuhambisa umqondiso, ebizwa ngokuba yinqaba yokuhambisa umqondiso okanye inqaba yomqondiso.Umsebenzi ophambili uxhasa ukuhanjiswa komqondiso kwaye uxhasa i-eriyali yokuhambisa umqondiso.Isebenzisa inkqubo yesathelayithi ephathwayo/i-unicom/yetrafikhi (GPS) kunye namanye amasebe onxibelelwano.Inqaba yoqeqesho lomlilo.
Inqaba yonxibelelwano yenziwe ngamacandelo ensimbi afana nomzimba wenqaba, iqonga, intonga yombane, ileli, inkxaso ye-antenna, njl.Isetyenziselwa kakhulu ukusasaza kunye nokuhanjiswa kwemicrowave, i-ultrashort wave kunye neempawu zenethiwekhi ezingenazingcingo.
Ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuqhelekileyo kwenkqubo yonxibelelwano engenazintambo, i-eriyali yonxibelelwano ibekwe ngokubanzi kwindawo ephezulu yokwandisa irediyasi yenkonzo ukufezekisa umphumo wonxibelelwano olufunekayo.
I-antenna yonxibelelwano kufuneka ibe nenqaba yonxibelelwano yokwandisa ukuphakama, ngoko ke inqaba yonxibelelwano idlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yonxibelelwano yonxibelelwano.
Ubude Ukususela kwi-10M-100M okanye ngokwemfuno yomthengi
Ubume Iipolygonal okanye iConical
Izinto eziphathekayo Ngesiqhelo Q235B/A36,Yeild Amandla≥235MPa
Kunye neKhoyili eQonxiweyo eshushu esuka kwi-ASTM572, GR65,GR50,SS400
Ukunyamezela komlinganiselo Ngokwemfuno yomthengi
Unyango lomphezulu I-Hot-dip-galvanized elandelayo i-ASTM123, okanye nawuphi na umgangatho ngokwemfuno yomxhasi
Ukudityaniswa kweePoli I-Slip joint, i-flanged edibeneyo
Ubude becandelo ngalinye Ngaphakathi kwe-13M kanye ukwenza
Welding Standard I-AWS(Umbutho we-Welding waseMelika)D 1.1
Iiphakheji Ukupakishwa ngephepha leplastiki okanye ngokwemfuno yomthengi
Ixesha loBomi Ngaphezu kweminyaka engama-25, oko kuhambelana nokusingqongileyo
IGuyed tower inenkangeleko yenoveli, kwaye uphawu lwayo olukhulu lomelezwa ngokusebenzisa ucingo lwentsimbi.
I-Guyed tower luhlobo oluqhelekileyo lwenqaba yonxibelelwano enoqoqosho kwaye iyasebenza.
Ikhaphukhaphu kwaye inexabiso eliphantsi kunezinye.
Ifanelekile kakhuluiindawo ezibanzi ngokwejografi.
Inqaba yokuzimela ngokuqhelekileyo yi-3leg ye-4leg tower, kunye nempahla yayo yipayipi yensimbi okanye intsimbi ye-angle.Ngokubhekiselele kwikhonkco, inqaba ye-tubula idibaniswe yi-flange, kwaye i-angle yensimbi yentsimbi idibaniswe ngamantongomane kunye neebholiti.
1.ukumelana nomoya onamandla.
I-coefficient encinci yomthwalo womoya,
2.Gcina ubutyebi bomhlaba, indawo efanelekileyo.
3.Uthutho olululo kunye nofakelo.
I-tube tower enye ikwabizwa ngokuba yi-monopole tower, enenkangeleko entle, egubungela indawo encinci ye-9 ukuya kwi-18 square metres, ixabiso elisebenzayo, kwaye yamkelwa luninzi lolwakhiwo.Umzimba weTower wamkela icandelo elisengqiqweni ngakumbi, elidityaniswe ngebholiti yamandla aphezulu.Ineempawu zokufakela lula kwaye iyakwazi ukuziqhelanisa neendawo ezahlukeneyo zentsimi enzima.
inqaba yomthi efihliweyo
I-Camouflaged Tree Tower ikwaluhlobo lwemithi ye-cartificial ye-Bionic tree tower, kwisiseko esifana neyokwenene, kunye noyilo olucokisekileyo, xa lubekwe phakathi kwemithi yokwenyani kwindawo yokubona indawo, ipaki kunye nesikwere, iya kuba yinxalenye yendalo.
1. Ubume obugqwesileyo, inkangeleko entle.
2. Uzinzo olomeleleyo lwesakhiwo, ubomi obude bokusebenza.
3. Ukugubungela indawo encinci, isiphumo esikhulu sezoqoqosho.
Ukuthengiswa ngokuthe ngqo kwifektri, ixesha elifutshane lokuKhokela, uQinisekiso loBulunga, Gxila kuyilo lwenqaba yentsimbi, imveliso kunye nokuthumela ngaphandle iminyaka emi-5
Fumana iinkcukacha ezininzi ngoku!
Ngaphambili: 10KV-500KV Transmission Tower
Okulandelayo: Isakhiwo soMbane woMbane